(Hawd Region Info vision)
As everybody knows we live in a world, which is being faced by wars, draughts and etc. every year or every decade you can see some people who are emigrating from their homeland, so that the question is, how can we solve the problems existing in the globe?
Eryadaas waxay ka mid yihiin hal-ku-dhigyada lagu ababiyo da’yarta deegaanka.
Xaalada dhaqaale, siyaasadeed iyo joqoraafi ee deegaanka:
Deegaanka Hawd wuxuu dhacaa koonfurta waqooyi ee xuduudka Soomaaliya iyo Ethiopia, magaalo madaxdiisu waa Buuhoodle. Sida ay dad badan ku tilmaamaan Deegaanku wuxuu ku yaalaa meel fog oo aanay gaadhi karin hay’adaha dawliga iyo kuwa aan dawliga ahayn sida UNka oo iyagu aan dhaafin meelaha siyaasadu ku buuqsan tahay. Waqtigan oo Soomaaliya aanay ka jirin dawlad, hadana marka la barbar dhigo dadaalka dadka deegaanku waa mid u baahan in wax lagu kordhiyo iyadoo gacan laga gaysanayo arimaha caafimaadka, kor u qaadista aqoonta, maamulka, isgaadhsiinta, kobcinta dhaqaalaha, nabada etc. sidaa awgeed deeganku wuxuu u baahan yahay wax qabad degdeg oo lagu kabo wax qabadka gaabiska ah ee dadku la daalaa dhacaynayo, iyadoo looga faa’iidaysan karo horumarka deegaanku gaadho, habka nadaam soocelinta iyo dib u noolaynta Soomaaliya oo in ka badan 12 sano kala daadsanayd.
Deeganku wuxuu ka mid noqday meelaha ugu degan dalka, tan iyo intii ka danbaysay burburtkii dawladii dhexe ee Soomaaliya, ilaa iyo hadana deegaanka kama jiraan wax dagaalo sokeeye ah oo u dhexeeya qabaailka, balse wuxuuba noqday meel xudun u ah nabada iyo wada noolaanshaha, sidoo kale xidhiidhka wanaagsan oo dhexeeya deegaanka iyo deeganada ku xeeran, muhiimada xoolaha nool iyo ganacsi ee deegaanku leeyahay, waxay ka dhigeen deegaanka xarun ganacsi oo muhiim ah. Dhaqaalaha deegaanku wuxuu ku xidhan yahay Xoolaha nool, Ganacsiga iyo Adeega Bulshada, dhaqaale ahaana waxaa deegaanka hoos yimaada in ka badan 70 tuulo xuduuda laba deeda dhinac, taas oo ka dhigtay deegaanka meel muhiimad gaara u leh ganacsi, waxaa kale oo iyana qayb wayn ka qaatay horumarka deegaanka oo bidhaansanayey nabadgelyada iyo deganaanshaha. Dhamaan arimahaas waxay keeneen in inta badan baaxada magaalooyinka ay kor u kacaan, gaar ahaan magaalo madaxda deeganka.
Deegaanku waxaa ka hirgalay maamul ay hogaaminayaan waxgaradka iyo aqoon yahanka deeganku, wuxuu na ka kooban yahay 4 degmo oo la sameeyey kadib bururburkii dawladii dhexe ee Soomaaliya iyo magaalo madaxda Buuhoodle.
Laga soo bilaabo 90-meeyadii markii xaaladu faraha ka baxday dalka Soomaaliya, waxaa si buuxda ula wareegay talada deegaanka Odayaasha, Waxgaradka iyo Aqoon yahanka, waxayna muhiimada koowaad saareen nabadgelyada iyo adeega bulshada. Deegaanku wuxuu noqday meel ay ka shiidaal qaataan deeganada ku xeeran oo la odhan karo guud ahaan waxay wadaagaan nabada iyo wada noolaanshaha. Taas oo keentay in deegaanku ku talaabsado horumar la taaban karo, tusaale ahaan waxaa la dhisay dugsiga sare ee Buuhoodle, waxaa dib u habayn lagu sameeyey dugsiyadii hore ee Buuhoodle oo shaqaynayey mudadii ay burbursanayd dawladii dhexe ee Soomaaliya, waxaa dib u hawl galay shan dugsi oo kuyaal magaalooyinka hoos yimaada deegaanka, waxaa deegaanka ka hirgalay iskuulo iyo machadyo gaar ah, waxaa markii ugu horaysay 1999 deegaanka laga hirgeliyey nadaamka telefonada, waxaa la balaadhiyey isbitaalka magaalada, waxaa abuurmay sheybaaro gaar ah, waxaa kale oo hada gacanta lagu hayaa mashruuca biyo gelinta ee magaalada madaxda Buuhoodle.
Degaanku wuxuu qani ku yahay xoolaha nool oo laf dhabar u ah dhaqaalaha soomaaliya, hadaba inkastoo deegaanku dawr muhiim ah kaga jiro dhaqaalaha dalka hadana wuxuu ka mid yahay meelaha aanay waxba ka qaban dawladihii u kala danbeeyey maamulka Soomaalya. Deegaanku ma lahayn waxayaalaha asaasiga u ah horumarka iyo jiritaanka aadanaha, marka laga reebo dhawr dugsi Hoose/dhexe oo la dhisay badidooda xilligii gumaysiga iyo hal dhakhtar bukaan socod oo la dhisay 60-dameeyadii. Deeganku ma lahayn Biyo, koronto, isgaadhsiin, nadaam caafimaad oo dhamays tiran iyo waxbarsho sare midnaba. Intaa waxaa u sii dheeraa deegaanka oo noqday meel ay ku hardamamaan Jabhadihii mucaaradka iyo dawladu sannadihii 80-tamaadkii, kuwaas oo dhaxalsiiyey burbur iyo culays dhaqaale oo hor leh.
Dhaqaalaha iyo joqoraafi ahaan
Waxaa mara deeganka qiyaas ahaan 23% badeecada ka soo degta Berbera ee u jeeda gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo bariga Ethiopia, sidoo kale waxaa mara 70% badeecada ka soo degta Basoso ee ujeeda bariga Ethiopia. Waxaa kale oo deegaanku gebi ahaanba marin u yahay xoolaha nool ee ka yimaada Gobolada dhexe ee Soomaaliya iyo Bariga Ethiopia.
Waxaa lagu qiyaasaa dadka ku nool magaala madaxda Buuhoodle 60.000 oo qof, waxaa kale oo hoos yimaada dhul daaqsineed aad u ballaadhan (very large rural area). Magaalada Buuhoodle oo ku taala joqoraafi ahaan meel xudun ah oo isku xidha Soomaaliaya, celcelis ahaan sannnadkii waxaa lagu qiyaasaa in halkii maalin ay u yimaadaan muraadsi dad gaadhaya 40.000 oo qof, kuwaas oo ka kala yimaada baadiyaha, magaalooyinka ku xeeran, socdaalka iyo ganacsatada ka kala yimaada ama ku sii jeeda magaalooyinka Boosaaso, Berbera, Lascanood, Burco, Galkacayo ilaa Muqdisho iyo bariga Ethiopia.